သင့် Apple TV ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ Apple Watch ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ ငါက Mac ကပါ
သင်၏ Apple TV ကိုထိန်းချုပ်ရန် Apple Watch ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
ယရှေု Arjona Montalvo | | Apple က TV ကို, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, လဲ tutorial
သင်၏ Apple Watch နှင့်သင်လုပ်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာတစ်ခုဖြစ်သည် Apple TV ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့်အတူ။ Apple က ၄ င်း၏ထုတ်ကုန်အားလုံးအကြားစုစုပေါင်းတွဲဆက်မှုကိုကြိုးစားပြီး Apple Watch ဟာနည်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ရှာဖှေတှေ့ သင်၏ Apple Watch ကိုမည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နှင့်မည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း သင့်ရဲ့ Apple TV ကိုဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူအောက်မှာသင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကိုထိန်းချုပ်ဖို့။ သေချာအောင်လုပ်ပါ iPhone နှင့် Apple TV တို့သည်တူညီသော Wi-Fi ကွန်ယက်တွင်ရှိသည်နှင့် Apple ID, တူညီသော Apple ID, iPhone နှင့် iTunes တွင် Home Sharing ကိုဖွင့်ပါ။ လျှောက်လွှာ 'Remote' viene Apple Watch တွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည်, ဒါကြောင့် App Store ကနေ install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါ။
အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ Apple Watch နှင့် Apple TV တွဲဖက်ထားသည်:
ကိုနှိပ်ပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူ သင်၏ Apple Watch ရှိအိမ်မျက်နှာပြင်သို့သွားရန်။
အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်အသာပုတ်ပါ ဝေးလံသော သင့် Apple Watch ရှိအက်ပလီကေးရှင်းမှ။
ကိုအသာပုတ်ပါ + ကိရိယာအသစ်တစ်ခုထည့်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်အဓိက menu ထဲမှ Settings သို့သွားပါ ယေဘုယျ အောက်ပါ ဝေးလံသော.
iOS Remotes အောက်ရှိ Apple Watch ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထိုအခါ ကုဒ်ထည့်ပါ ဒီတစ်ခုရဲ့ထိပ်မှာပေါ်လာတယ်
သင်၏နာရီသည်ယခုဖြစ်သင့်သည် မင်းရဲ့ Apple TV နဲ့တွဲဖက်။ သင့် Apple TV ကိုစတင်ရန် Apple TV ကိုစတင်အသုံးပြုရန် Apple TV icon ကိုနှိပ်ပါ။
ရိုးရိုးအမူအယာများကို သုံး၍ Apple TV ကိုထိန်းချုပ်ရန်အဝေးထိန်းအက်ပလီကေးရှင်းကို Apple Watch တွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပါ လက်ပတ်နာရီ ဒါကြောင့် trackpad ဖြစ်လျှင်အဖြစ်။ မီနူးရွေးချယ်မှုများအကြားဘယ်ဖက်နှင့်ညာဘက်သို့တွန်းပါ။ မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ထားခဲ့တာပဲ Apple Watch တွင်မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple က TV ကို » သင်၏ Apple TV ကိုထိန်းချုပ်ရန် Apple Watch ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Apple Campus2အတွင်းပိုင်းကိုကန်ထရိုက်တာအသစ်တစ်ခုဖြင့်လည်ပတ်မည်
Logitech K310 ဆေးကြောနိုင်သောကီးဘုတ်နှင့် USB ဆက်သွယ်မှုလျှော့ချထားသော